Iwu Nkwebe maka Ịbịba Sịga Canada
Iwu Nchịkwa maka ndị bi na Canada na-eweta ụtaba Canada
Mgbe ịlaghachi na Kanada, a na-enyekarị ndị bi n'ụlọnga na ihe onwunwe ha na-esi na mba ọzọ weghachiri ha. Ma mgbe ọ na-abịakwute ngwaahịa ụtaba dịka sịga, sịga, cigarillos, ụtaba na ụtaba, ụkọ a anaghị emetụta.
Otú ọ dị, ndị bi na Canada na ndị bi nwa oge na Canada na-alọghachi site na njem Canada, tinyere ndị Canada mbụ na-alọghachite ibi na Kanada, na-ekwe ka ha buru oke ego nke ngwaahịa ndị a na-emepụta sịga na mba n'enweghị ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụtụ isi n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ.
Mgbe ị na-atụle ịlaghachi na Canada, cheta na nnwere onwe a na-akwụ ụgwọ na-emetụta nanị ma ọ bụrụ na ụtaba na-eso gị, na ị nọ n'èzí Canada maka ihe karịrị awa 48.
Onyinye na-akwụ ụgwọ ọrụ mgbe ị lọghachiri na ụtaba
Ọrụ pụrụ iche ga-emetụta sịga, ụtaba ma ọ bụ rụpụta ụtaba ọ gwụla ma amapụtara ngwaahịa ahụ "DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ." A na-ere ngwaahịa na-emepụta sịga na-ere n'ụlọ ahịa na-arụ ọrụ.
Mgbe anyị laghachiri Canada na ụtaba, a na-atụle ngwaahịa ndị a na mpaghara. A na-ewere ihe ọ bụla a na-atụle dị ka otu unit, ndị bi na ya nwere ike ịlaghachi na mpaghara niile ndị a:
50 cigars ma ọ bụ cigarillos
200 grams (7 ounces) nke emepụta ụtaba
200 ụtaba na-arapara
Na-eweta More ma ọ bụ Ndị ọzọ na-emepụta sịga na Canada
Ị nwere ike iweta ihe karịrị ikikere nke ụtaba edepụtara n'elu ma ọ bụrụhaala na ị na-akwụ ụgwọ ọrụ zuru ezu, ụtụ isi, na ụgwọ mpaghara ma ọ̄ bụ ókèala.
A na-echebara ngwaahịa ndị Canada aha "DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ" mgbe ndị ọrụ nchịkọta kwadoro ihe ị ga-akwụ.
I nwekwara ike weta ngwaahịa na-emepụta sịga na Canada, ma a ga-enyocha ha ụtụ ọrụ na ụtụ isi pụrụ iche. Ọrụ nke onwe gị-nnwere onwe n'efu anaghị agụ maka ngwaahịa ụtaba ndị a na-edebeghị, na njedebe maka ụtaba a bụ ngụkọta zuru oke ise site na listi echekwara n'elu.
Atụmatụ maka imebi iwu na ụtaba
Iji mee ka ihe dị mfe ma mee ka nlọghachi gị dị mfe, mee ka ngwaahịa ụtaba gị nweta maka nyocha mgbe ị rutere n'ókè.
Jide n'aka na ị ga-ekwupụta ụtaba niile na CBSA Declaration Card.
Naanị ndị bi 18 afọ ma ọ bụ karịa nwere ike ibute ụtaba na Canada.
Kpọtụrụ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Kanada na Canada ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ maọbụ choro ịmatakwu ihe ọmụma banyere ịṅụ sịga na Canada .
Ihe nkwụsị nke ndị nchịkwa maka ịlaghachi ndị bi na Canada
Nyochaa Parks National na Provincial na Canada
Ònye Bụ Nellie McClung? Gịnị Ka O Mere?
Akaụntụ My Canada Service
Ebube nke ebe ndi ozo di na Canada
Otu esi ejikọta "pịa" (iji kwado ma ọ bụ dabere na ya)
Nchịkọta Nchịkọta Ahị
Akụkọ banyere King Arthur na Nkiri
Italian Verbs: Trasferire
Ihe na-adịghị agwụ agwụ Il na Lo na Early Italian
Otua esi aguta akwukwo n'igwe
Otu esi gbanwee okpu
Emeela Ntorobịa Gị Dị Ka Ugo - Abụ Ọma 103: 5
British Ladies Amateur Championship Ndi mmeri
Ndi Dinosaur na ndi ozo nke Maine
Gịnị Bụ Ịdọ Aka ná Ntị?
Ihe omuma Gbasara Akwukwo Nso maka imuta German
Eziokwu gbasara Ụkpụrụ azụ azụ, Ụdị, na Gauges
Ụkpụrụ Nanị Ụmụaka nke China
Mepụta Ebe E Ji Nweta Ogwe
Nhọrọ Triad nke Piano
Cleveland Launcher TL310 Review Driver
Ogba mmiri: Energy, Movement, na Coast
Esi Nyochaa na Ịkụziri Ịgụ Ihe Ịgụ
Nagide Ọnwụ Ọnwụ ma ọ bụ Nwee Ụgwọ Ọkụ
Daniel O'Connell nke Ireland, The Liberator
Ihe omuma nke Snow na Ice Science
N'afọ iri asaa nà asaa na 1970, ndị isi oche nke nwanyị: Mary Tyler Moore Show
Ihe iri na ụma nke ajọ ifufe na ajọ ifufe na Akụkọ Ụwa
Nkọwa nke Idiographic na Nomothetic